Elements 113, 115, 117, kunye ne-118 Ngaba Kufunyanwe I-Official Journal
Itheyibhile yenkcazelo njengoko siyazi ukuba ngoku iphelele! I-International Union ye-Pure ne-Applied Chemistry ( IUPAC ) ivakalise ukuqinisekiswa kwezinto kuphela ezishiywe - iziqendu 113, 115, 117, kunye ne-118. Ezi zinto zizalise umgca we-7 kunye nomgca wokugqibela wetheyibhile yamaxesha . Enyanisweni, ukuba izixhobo ezinama-atomic aphezulu zifunyenwe, umgca owongezelelweyo uya kufakwa kwitafile.
Iinkcukacha kwiiNgxelo zeNqununu ezine zokugqibela
I-4 ye-IUPAC / IUPAP yokuBambisana iqela (JWP) lihlolisise iincwadi ukufumana amabango okuqinisekiswa kwezi zinto ezimbalwa ezigqityiweyo zizalisekise zonke iindlela ezifunekayo ukuze "ngokusemthethweni" zifumane izinto.
Oko kuthetha ukuthini ukufunyanwa kwezinto kuye kwachazwa kwaye kuboniswa ukwaneliswa koososayensi ngokwemigaqo ye-1991 yokufumanisa i-IUPAP / IUPAC Transfermium Working Group (TWG). Ukufunyaniswa kuthiwa yiJapan, i-Russia kunye ne-USA. La maqela aya kuvunyelwa ukuphakamisa amagama kunye neempawu zezinto, eziya ku funeka zivunywe phambi kokuba izinto zithathe iindawo zazo kwitheyibhile lexesha.
Element 113 Ukufumanisa
Element 113 inegama lesigxina lomsebenzi ununtrium, kunye nesimboli Uut. Ithimba le-RIKEN eJapan lithathwa ngokuba lifumanisa le nto. Abantu abaninzi bathemba iJapane baya kukhetha igama elinjenge "japonium" kule nqaku, kunye nesimboli J okanye iJp, ekubeni iYe yileta enye engekhoyo kwitheyibhile.
Izinto ezili-115, 117, no-118 Ukufumanisa
Izixhobo ezili-115 (ezingenayo i-Ununpentium, Uup) kunye ne-117 (i-ununseptium, i-Uus) zafunyanwa ngokubambisana phakathi kweLebhu yeSizwe e-Oak Ridge e-Oak Ridge, TN, iLawontmore yeLivermore yeLebhu yeSizwe eCalifornia, kunye ne-Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, eRashiya.
Abaphandi abavela kula maqela baya kuphakamisa amagama amasha kunye nemiqondiso yalezi zinto.
I-Element 118 (ununoctium, Uuo) ukufumanisa kuthiwa yintsebenziswano phakathi kweZiko elihlangeneyo loPhando lweNyukliya eDubna, eRussia noLawrence Livermore National Laboratory eCalifornia. Eli qela lifumene izinto ezininzi, ngoko bayaqiniseka ukuba banomngeni phambi kwabo beza ngamagama amatsha kunye nemiqondiso.
Kutheni Kubunzima Ukufumanisa Izinto Ezintsha
Nangona izazinzulu ziyakwazi ukwenza izinto ezintsha, kunzima ukubonakalisa ukufumanisa ngenxa yokuba le nuclei ephezulu yonakala kwizinto ezikhanyayo ngokukhawuleza. Ubu bungqina bezinto zifuna ukuba kubonakaliswe ukuba i-nuclei yentombi ebonwayo ingabonakaliswa ngokungathandekiyo kwinto enzima, into entsha. Kuya kuba lula xa kwakunokwenzeka ukufumana ngokuthe ngqo nokulinganisa into entsha, kodwa oku akunakwenzeka.
Kude Kude Sibone Amagama Amitsha?
Emva kokuba abaphandi bathetha amagama amasha, i-Inorganic Chemistry Division ye-IUPAC iya kubajonga ukuqinisekisa ukuba abaguquleli into ethile engabonakaliyo kwezinye iilwimi okanye babe nokusetyenziswa kwangaphambili kwimbali ebenokubangela ukuba bangafaneleki igama legama. Isitsha esitsha singathiwa indawo, ilizwe, isayense, ipropati, okanye intsholongwane. Isimboli kufuneka sibe yileta okanye ezimbini.
Emva kokuba iCandelo leComistry lase-Inorganic lihlola iingqalelo kunye neempawu, zinikezelwa ukuphononongwa koluntu kwiinyanga ezintlanu. Uninzi lwabantu luqala ukusebenzisa amagama amashishini amatsha kunye neesimboli kule ngongoma, kodwa aziyi kuba sesikweni kude kube yilapho iBhunga le-IUPAC livuma. Kule ngongoma, i-IUPAC izakutshintsha iitheyibhile zabo (kunye nabanye baya kulandela).
Iimpawu zeAtomic zeE Elements
Amanqaku angama-10 anomdla
Funda iJapan Word Aku
I-Ballon d'Or Abaphumeleleyo
Iingoma ezilishumi eziqhelekileyo malunga nokuqhawulwa kwabantu ababi
Ukusebenzisa iNkqubo nganye kwiRuby
Ngubani othethayo ngegama elithi 'Iimvumi'?
Umbhalo woBugcisa noBulumko: iiComplete zeClass on Life, Love and Literature
UMTHETHO Ulinganisa ukufakwa kwiiKholeji zase-Alabama
Indlela yokusebenzisa iSling Rifle Ukuchaneka nokuThuthuzelwa
Ukufundisa UkuFanisa kunye neFom ephezulu kwiSL Students
Ukubethelwa kwezemidlalo: Indlela yokuHlaliswa kweMidlalo